Ucwaningo Lwezenhlalo Lithi: Abanikazi Bayakhuphuka | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 19, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 ULorraine Ball
Ngokusho the Ucwaningo Lwezokuxhumana Komphakathi Oluncane ngo-2011, osomabhizinisi bayithatha kakhulu imithombo yezokuxhumana ukwedlula unyaka owedlule. Ocwaningweni olwenziwe kusuka ngoMeyi 1, 2011 - Julayi 1, 2011 sibuze osomabhizinisi abancane abangama-243 (izinkampani ezinabasebenzi abangaphansi kuka-50) abakha okuqukethwe kuma-akhawunti abo ezinkundla zokuxhumana.
Kusukela ekuphenduleni kwabo, bekusobala ukuthi abanikazi bathatha imithombo yezokuxhumana ngokungathi sína njengoba ngaphezulu kuka-65% bekhombisile ukuthi babambe iqhaza elibonakalayo ekwakheni okuqukethwe. Leli phesenti lalingaguquguquki phakathi kwamaqembu ahlukene osomabhizinisi abancane, size sibheke izinkampani ezinabasebenzi abangaphezu kuka-25 ngaleso sikhathi.
Noma ukubamba kwabo iqhaza kuqala ukuwa, ama-50% wabanikazi balezi zinkampani ezinkulu basabandakanyekile. Kusobala, noma kunjalo, laba baphathi badlulisela umthwalo omkhulu wokwenziwa kokuqukethwe kokuxhumana nabantu kwabanye.
Ubani ongumnikazi wokuqukethwe kokuqukethwe kwezokuxhumana
Ngenkathi izinkampani eziningi zitshuza ezinkundleni zokuxhumana, izinhlelo zazo ziyashoda ngoba azizichazi kahle izindima. Behluleka ukunquma ukuthi ngubani ozokwakha okuqukethwe, kangaki nokuthi yini.
Kungidumazile ukubona ngaphezu kwezinkampani in ezikucwaningweni ezingasebenzisi amakhasimende namathemba njengabavelisi bokuqukethwe.
Ukusuka kobufakazi nokungena, kuma-FAQ nezingxoxo, izinkampani zilahlekelwa yithuba elikhulu ngokungazibandakanyi lezi zindawo.
Yize kwehluka ngokwenkampani kunezinkomba eziqinile zokuxhumana kwabantu ezithathwa ngokungathi sína ngo-2011. Isibonelo: Cabanga ngendima yabafundi. Ocwaningweni lwethu lukaFacebook lwango-2010, amabhizinisi angaphezu kuka-80% ayenabafundi abasafundile akhombisa ukuthi lo mfundi wayebandakanyeka ekwakhiweni kokuqukethwe kwezokuxhumana.
Kithina, lokhu kukhombe izinkampani zeqiniso ezazingazithathi ngokungathi sína amathuluzi. Ukube bebenayo, bebengeke bathembele kwilungu elinolwazi oluncane lweqembu labo ukuhola ukuthuthukiswa kokuqukethwe. Ocwaningweni lwalo nyaka, kuphela u-30% wezinkampani ezinabafundi abasafundile abakhombisile ukuthi bayabandakanyeka ekudalweni kokuqukethwe.
Yize abanikazi bamabhizinisi abaningi bekholelwa ukuthi imithombo yezokuxhumana iwukwenzela ngokwakho uhlobo lomsebenzi, kunentshisekelo ekhulayo yokuqasha izinkampani zokumaketha nezokuxhumana ukuze zisekele imizamo yazo. Sekukonke, cishe u-10% wezinkampani ezikucwaningo ziveze ukuthi inkampani yangaphandle ibibambe iqhaza ohlelweni lwenkampani yezokuxhumana. Ngenkathi bengilindele ukuthi amafemu amakhulu abheke ngaphandle ukuthola usizo, izinkampani eziningi ezisezingeni lomuntu ongu-6-10 nazo zazifuna izinsiza zangaphandle.
Okumangazayo ukuthi izinkampani ezinabasebenzi abayi-11 - 24 bebencane amathuba okuthi zisebenzise inkampani yangaphandle. Kungani? Sicabanga ngalolu sayizi, izinkampani zinomuntu osebenzayo onesikhathi sokuzinikela emisebenzini yezokuxhumana. Njengoba bekulindelekile, izinkampani ezinkulu kunazo zonke kungenzeka ukuthi nazo zibe nomsebenzi osebenza ezinkundleni zokuxhumana. Ukuphawula futhi kukhombisa ukungqubuzana phakathi kwamakamu okuzenzela nawokuqasha-a-pro.
Bathini osomabhizinisi ngokuthola usizo ezinkundleni zokuxhumana?
Qasha umuntu ukusetha ama-akhawunti futhi akufundise ukuthi uwaphatha kanjani ngempumelelo. Kunzima ukuhambisana nabo bonke ngesikhathi esifanele.
Yenza ubuchwepheshe wenze iMedia Media yakho. Uqasha i-CPA ngoba awukwazi ukwenza i-accounting, uqasha uchwepheshe wezokuxhumana.
Kulezi zinsuku wonke umuntu "uchwepheshe wezokuxhumana zomphakathi" wazi okuningi njengabo.
Qasha umuntu ongakufundisa, thola amathuluzi ezinkundla zokuxhumana asebenze ahambisana nomkhiqizo wakho.
Yamukela imithombo yezokuxhumana kepha yiba nehlazo labachwepheshe bezokuxhumana nabantu "nabacebisi".
Ungathanda ikhophi yemiphumela ephelele yocwaningo? Ungalanda kusuka ku- I-Roundpeg, inkampani yezokuxhumana yase-Indianapolis.